Iresiphi yasePiadin kunye namazambane, ithanga kunye ne-ricotta
Indlu yasekhaya Recipes Okunye Izithako Imifuno Iphunga
Enye ipencake evela eItaly Piañina mhlawumbi isitya esiphezulu seRomagna eItali. I-pjadina elungiselelwe ngokulula - ufulawa, ityuwa, amanzi kunye neoli yeoli -zizo zonke izithako! Ngokuqhelekileyo i-piadin idliwa nge ham kunye neentshizi ezahlukeneyo, idibanisa iqabunga elincinci le-lettuce, kodwa ngeli xesha siza kulungisa ipadadin ngokugxila kumathanga, amazambane kunye ne-Ricotta ushizi. Olu gcwaliso luya kwenza i-pjadin enomanzi kwaye ithambile. I-Piadina ingaba yintlanzi enkulu, kunye nesidlo sasemini okanye isidlo sakusihlwa! Yaye inkulu ngokuba "yinkqubo enomileyo" endleleni!
Amanzi 3 tbsp. l.
Ukunyuka kwePowder 0.5 tsp.
Ricotta ushizi 250 g
Iphunga 300 g
Inyathelo 1 Ukulungiselela i-piadina uya kufuna ufulawa, ityuwa, ioli, i-powder baking kunye namanzi. Ukuzaliswa - ithanga, iitatayi, i-anyanisi, ushizi weRicotta, ityuwa kunye ne-nutmeg.
Inyathelo 2 Hlanganisa umgubo, ityuwa, i-powder baking, uze ungeze iioli zeoli kunye nokunyusa umncinci. Yongeza amanzi ngokukhawuleza ukuze ufumane intlama elula.
Inyathelo 3 Hlanganisa inhlama de ibe yincinci. Uya kufuneka uyenze oku kungenani imizuzu eyi-15. Shiya inhlama imizuzu eyi-10 ukuphumla. Bese uhlula intlama ephelileyo ibe ngamaqatha amathathu afanayo.
Isinyathelo 4 Okwangoku, qalela iinjenge kwaye upheke amazambane. Xa iifatata zikulungele, zipholile kwaye zihlambulule. Ingqungquthela mayiyeke i-sieve ukuba ilahlekelwe yimbi.
Inyathelo 5 Sula amazambane abilisiwe kwi-grater enkulu, engeza ithanga kunye ne-ricotta. Fry, ityuwa, ipolisi kwaye wongeze i-nutmeg (ukuba ufuna).
Inyathelo 6 Ngoku ulungiselele i-piadine. Ukwenza oku, gxuma ibhola yenhlama ibe yi-pancake, malunga no-2-3 mm ubukhulu.
Isinyathelo 7 Beka enye yokuzalisa kwisigamu esinye, ushiye isikhala esincinci
Isinyathelo 8 Vala isiqingatha sesibini kwaye ukhusele emaphethelweni ngefoloko, ngaphambi kokucoca umgca ngamanzi.
Isinyathelo 9 Beka i-piadin kwikompu elitshisayo, ungayigcini. Ukugubha kwi-heat ephakathi kumacala omabini aze abe ne-golden hue. Khonze ngeoli yeoli.
Ipey nut nut
Isobho lomgquba kunye namazambane kunye ne-oat flakes
Ngokuthandana akuphikisi! Physiology yongcamango
UDima Bilan wabanjwa kabini ngokusabalalisa iziyobisi
Madayimane aseLyudmila Zykina
Ikhukhi "Iingqungquthela zeKonon"
I-Beetroot Soup kunye neTamatates kunye neziNko
Indlela yokuphilisa ukunyuka kwelanga
Ukubuyisela umzimba womfazi emva kokubeleka
5 imithetho eyisiseko yokuhlala kunye
UKeira Knightley ekuhambeni kwakhe yokuqala nentombi yakhe esandula
Biography kaGisele Bundchen
I-aphrodisiacs ezi-10 eziphezulu: endleleni eya kwisini esihle